Dumpster အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
၏ဖော်ပြချက် Dumpster - Recover Deleted Photos & Video Recovery
ဒေါင်းလုပ် 45 သန်းကျော်ဖြင့် Dumpster သည် Android အတွက် Recycle Bin ဖြစ်ပြီးပယ်ဖျက်ရန်ဓါတ်ပုံများကိုပြန်လည်ရယူရန်နံပါတ် 1 အသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်မကြာသေးမီကဖျက်ပစ်ထားသောဗီဒီယိုများမှဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ် sd card မှဗီဒီယိုများပယ်ဖျက်ရန်အမြန်ဆုံးနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒေတာပြန်လည်နာလန်ထူမှာဘယ်တော့မှမလွယ်ကူပါ။
Dumpster နှင့်အတူအားလုံးတစ်နေရာတည်းတွင်လာသည် - သင်သည်ဖျက်ပစ်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည်, ဓာတ်ပုံများပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည်, မကြာသေးမီကဖျက်ပစ်ထားသောအက်ပ်များနှင့်အခြားဖိုင်များ။ ဒေတာနှင့်ဓာတ်ပုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးစက္ကန့်အတွင်း။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော Cloud သိုလှောင်မှု, နက်ရှိုင်းသောမီဒီယာရှာဖွေတွေ့ရှိမှု algorithms နှင့်အတူလုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များထည့်သွင်းထားသည်။ သင်၏ဖိုင်များသည် Dumpster နှင့်အမြဲတမ်းလုံခြုံသည်။
and and ✔ချက်ချင်းပြန်လည်ရယူရန် အရေးကြီးသောဖိုင်များ, မကြာသေးမီကဖျက်ပစ်ထားသောအက်ပ်များ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ - ဓာတ်ပုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိရိယာများ။
video ပြန်လည်ထူထောင်ရေး, ဓာတ်ပုံများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း, ဓာတ်ပုံများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း, လိုအပ်သည်။
✔သင်၏ device ကို root လုပ်ရန်မလိုပါ။
✔ Lock screen Captiles *
✔ compute lock screen စွမ်းရည် *
✔ Custom Withiness & Designs *
* သည်ပရီမီယံဖြင့်လာသည် အကောင့်။
backer backster သည်သင်၏ဖုန်းအတွက် Recycle Bin နှင့်အတိအကျအလုပ်လုပ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုသင် download လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏မကြာသေးမီကဖျက်ထားသောဒေတာများကို root privileges မပါဘဲအလိုအလျောက်အရန်ကူးယူခြင်း, ဖိုင်များကို rootelets undelete လုပ်ခြင်း, ဓာတ်ပုံများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်ပယ်ဖျက်သောဓာတ်ပုံ Recovery Tool ကိုသင်လိုအပ်သည့်အခါသင်၏ One-Stop ဆိုင်တစ်ခု, ဗီဒီယိုကိုပြန်လည်ရယူရန်အိတ်ဆောင်သို့မဟုတ် Recycle Bin ကိုပြန်လည်အသုံးပြုပါ။ ဗွီဒီယို, ဓာတ်ပုံ, ဒေတာဖိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး - သင်အမည်ကိုအမည်ပေးပါ။ Dumpster က Android အတွက်အဆုံးစွန် Recycle bin! ✔
ကို dumpster's Lock Lock functionality ၏အကူအညီဖြင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများ, ဗွီဒီယိုများနှင့်ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းရန်သင်၏မီဒီယာကိုယခုကာကွယ်ရန်သင်၏မီဒီယာကိုယခုကာကွယ်ပါ။ သင်၏မီဒီယာဖိုင်များကိုပြင်ပကြည့်ရှုသူများမှလုံခြုံစွာ ထား. သင်၏ dumpster data ကို4ဂဏန်းလုံခြုံသော0န်ဆောင်မှုကုဒ်ဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်။
dumpster အလှည့်အလှည့် လေပြေသို့ပြန်ယူပါ။ ဖျက်ပစ်ထားသောအက်ပ်များနှင့်ဓာတ်ပုံပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများသည်ချက်ချင်းနှင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည် - သင်၏ Recycle Bin ကိုရိုက်ထည့်ပါ, သင် restore လုပ်လိုသည့်အက်ပ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏စက်ပေါ်တွင်ချက်ချင်းပြန်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ Dumpster သည်ဖျက်လိုက်သောအက်ပ်များ, ရုပ်ပုံများ, ဗွီဒီယိုများ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားအရာများအားလုံးအတွက် backup ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာမရှိပါက Dumpster သည်၎င်းကိုသင်၏စက်ထဲသို့ချက်ချင်းပြန်ယူနိုင်သည်။ သီးခြားဓာတ်ပုံအရန်ကူးခြင်းသို့မဟုတ်ဖိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်၏ကိရိယာပေါ်တွင်အဖိုးတန်သိုလှောင်ရန်နေရာလွတ်ပေးပါ။ Dumpster ၏အကန့်အသတ်မရှိသော cloud သိုလှောင်မှုသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့၏မကြာသေးမီကဖျက်လိုက်သောဖိုင်များအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းရန်အသုံးပြုသူများကိုအထောက်အကူပြုသည်။ Dumpster Premium အသုံးပြုသူများသည်ကြော်ငြာများအခမဲ့, ကိုယ်ပိုင်အခင်းအကျင်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများပါ0င်သည့်အပိုဆုကြေးကိုခံစားကြလိမ့်မည်။
" မကြာသေးမီကဖျက်ပစ်လိုက်သောဓာတ်ပုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုရှိလား "
ဒေတာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံး? " - ဒါလွယ်ပါတယ်! :)
Dumpster နှင့်အတူ, dumpster နှင့်အတူ, နောက်ဆုံးတွင်သင်ပိုမိုသိသိသာသာတစ်ခုခုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒေတာပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ Dumpster သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအသုံးပြုသူများမှအမည်များကိုကြွယ်ဝသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ဗီဒီယို Recovery အက်ပလီကေးရှင်းများ, Recycle Bunupup app, recovered photo recovery app, Recovered Photo Recovery app, သင်ခေါ်ဆိုသည့်အရာမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, သင် Install dumpster ကိုတစ်ချိန်ကသင်အဖိုးတန်သောဖိုင်များ, ဓါတ်ပုံများကိုအရန်ကူးခြင်း, ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း, ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်အခြားဒေတာများကိုကာကွယ်ရန်ကူညီမည့်စမတ်ကိရိယာတစ်ခုရရှိသည်။
မေးခွန်းများ? Dumpsster's FAQ Section: https://dumpster captobi/faq သို့မဟုတ် [email protected] တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ဘာအသစ်လဲ Dumpster - Recover Deleted Photos & Video Recovery 3.11.397.f3a9
How to Recover Deleted Videos, Photos on Android using ONE Tool! 2021 Method
Alpha Media UG